नेयमारलाई किन हटाइयो क्याप्टेनबाट ? «
नेयमारलाई किन हटाइयो क्याप्टेनबाट ?
प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १४:०३
एजेन्सी । ब्राजिली राष्ट्रिय फुटबल टिमको कप्तानबाट नेयमार ‘आउट’ भएका छन् । अर्को महिना सुरु हुने कोपा अमेरिकामा ब्राजिली टिमको कप्तानी डानी अल्भेसले निभाउने भएका छन् । ब्राजिलका मुख्य प्रशिक्षक टिटेले गत बर्ष सेप्टेम्बरमा नेयमारलाई स्थायी कप्तानको रुपमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि प्रत्येक खेलमा फरक फरक खेलाडीलाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिने चलन टिटेले सुरु गरेका थिए ।
अब नेयमारले सम्हाल्दै आएको ब्राजिली टिमको कप्तानी ३६ बर्षका क्लब सहकर्मी अल्भेसले निभाउनेछन् । नेयमार र अल्भेस फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीबाट क्लब फुटबल खेलिरहेका छन् । ब्राजिली फुटबल संघले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै कप्तान परिवर्तनको निर्णय गरिएको जानकारी गराएको हो । फ्रान्सेली लिगको सिजन सकिए लगत्तै सो घोषणा गरिएको हो । गत महिना भएको कोपा डे फ्रान्सको फाईनलमा पराजित भएपछि विपक्षी टिमका प्रशंसकलाई मुक्का प्रहार गरेको भन्दै नेयमारलाई फ्रान्सेली लिगमा तीन खेलको प्रतिबन्ध लगाईएकोे छ ।
ब्राजिली स्टार नेयमारले यस सिजन सबै प्रतियोगितामा २३ गोल गरेका छन् । उनी फ्रान्सेली लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीको पाँचौ नम्बरमा छन् । उनी भन्दा अगाडी टिमकै सहकर्मी केलियन एम्बाप्पे र ईडिन्सन काभानी छन् । यस पटक कोपा अमेरिका ब्राजिलले आयोजना गर्दैछ । आठ पटकको च्याम्पियन ब्राजिल यस पटक प्रतियोगिताको समुह एमा छ । ब्राजिल रहेको समुहमा बोलिभिया, पेरु र भेनेजोयला छन् । जुन १४ मा ब्राजिलले बोलिभियासंग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ ।